Gaadiid badan oo ku xayiran Shabeelaha Hoose. | allsaaxo online
Gaadiid badan oo ku xayiran Shabeelaha Hoose.
Published on November 14, 2018 by said · No Comments
Ku dhawaad 300 oo gaadiidka Xamuulka ah ayaa waxaa ay ku xayiran yihiin inta u dhexeysa Deegaanka Carbiska iyo Duleedka Degmada Afgooye ee Gobalka Shabeelaha Hoose.
Ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa la sheegay in ay hortaagan yihiin Gaadiidka Xamuulka ee qaada Raashiinka.
Gaadiidkan ayaa waxaa ay ku wajahnaayeen Gobalada bay, Bakool iyo gedo, iyagoona Gobaladaasi geynaya raashiin ay wadaan, Waxaana Mudo 6 maalmood ay ku xayiran yihiin Deegaanka Carbiska iyo Duleedka Degmada Afgooye.
Mid ka mid ah Darawalada ka xeeya Gaadiidka xamuulka, islamarkaana ku xayiran Deegaanada ka tirsan Gobalka Shabeelaha Hoose ayaa allsaaxo ugu waramay dhibaatada ay la kulmeen.
Dhanka kale Maamulka Gobalka Shabeelaha Hoose ayaa Sheegay in gaadiid aad u fara badan ay ku xayiran yihiin Degmada Afgooye ee Gobalka Shabeelaha Hoose.
Cabdi Fatax Xaaji Cabdulle oo ah Gudoomiye ku xigeenka Maamulka Shabeelaha Hoose ayaa allsaaxo u sheegay in Ciidamo ku labisan dareenka ciidanka Dowlada Soomaaliya ay gaadiidka ku dhibaateynayaan inta u dhexeysa Afgooye iyo Wanla-weyn, isagoona sheegay wadooyinkaasi la soo dhigay Jidgooyooyin, iyadoona lagu dhibaateynayo gaadiidka sida uu hadalka uy dhigay.
Gudoomiye ku xigeenka Maamulka Gobalka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in mushaarkii loogu tala galay Ciidanka Dowlada olole lagu galayo, islamarkaana waxaa uu tilmaamay in ay aad u careysan yihiin Ciidamada, isagoona xusay in ciidanka ay sheegeen in ay ciqaabayaan Shacabka ku Safra wadada u dhexeysa Degmooyinka Afgooye iyo Wanla-weyn ee Gobalak Shabeelaha Hoose.